Joyina i-Team Hodges U! Buka Amathuba Wethu Wokuqashwa
Ngabe Ukulungele Ukujoyina Izinga Elilandelayo Kwimfundo Ephakeme?
EHodges University, sizibophezele ekuqasheni kuphela ubuhlakani obuhle kakhulu nabasebenzi bokuxhasa abafundi bethu ezindleleni zabo zokuphumelela. Uma unentshisekelo yokusiza abanye bafeze izinhloso zabo, khona-ke sifuna wena eqenjini lethu. Uma lokhu kuzwakala njengawe, khetha elinye lamathuba ethu okuqashwa bese uthumela i-CV yakho.
Khuthaza. Joyina iqembu laseHodges University namuhla!
Sesha Amathuba Wokuqashwa
Mayelana neHodges Employment
Ingxoxo noGloria Wrenn, uMqondisi Wezabasebenzi:
Yini into enhle kakhulu ngokusebenza eHodges University?
“Izizathu ezintathu eziphezulu kuzoba:
Abantu abasebenza lapha. AmaHodges ngoba abaningi bangumndeni wesibili, futhi angikaze ngibone abantu abaningi kangaka benesifiso esinjalo futhi basebenza kanzima kangaka ndawonye ngenhloso efanayo yokwenza iHodges iyunivesithi engcono kakhulu hhayi e-SW Florida kuphela, kepha noma kuphi.
Sinabasebenzi abahlukahlukene futhi abahlanganisayo futhi - wonke umuntu olapha uvela kwenye indawo - futhi ngicabanga ukuthi ngenxa yalokho abasebenzi bamukela kakhulu abantu abavela kwamanye amasiko noma imvelaphi.
Siyinhlangano esungula izinto ngendlela esethula ngayo amakilasi kubafundi, futhi sesibe isikhungo esiguquguquka kalula futhi esingashintsha ngokushesha njengoba izidingo zaseyunivesithi noma zemfundo ephakeme zifuna. ”
Ziyini ezinye zezinzuzo zokuqashwa noHodges U?
“IHodges University isendaweni enhle eseFort Myers, eFlorida enelanga, ayibhemi ugwayi, futhi izuze IBlue Zone Workplace ukuqokwa, (isikhungo semfundo ephakeme sokuqala ukwenza njalo esifundeni) esikhuthaza imikhuba enempilo. Ngaphezu kwalokho, zonke izikhundla zesikhathi esigcwele zifaka phakathi iphakethe lemihlomulo evulekile engafaka izinzuzo zezempilo, ukumbozwa komshuwalense, nokuyekelwa izifundo. ”
Okuhlangenwe nakho kwe-Faculty and Staff
Yini enhle kakhulu ngokusebenza lapha?
“Ukubuka impilo yabafundi kuyashintsha. Kwenza konke engikwenza lapha kube nenjongo, ” UTeresa Araque, Umphathi Wezokumaketha / Wezokwazisa Womphakathi we-AVP
“Umndeni. Nginomndeni wami "wasekhaya" nomndeni wami "osebenzayo" futhi angikwazi ukwenza ngaphandle kweyodwa. Sinezinsuku ezihlanyayo njengazo zonke ezinye izinhlangano, kepha ekugcineni kosuku esikwenza lapha kubaluleke kakhulu. Abantu beza lapha bezoshintsha umkhondo wenhlala-kahle yawo yonke imindeni yabo bese sithola usizo, ” U-Erica Vogt, Iphini Likamongameli Ophethe Lokusebenza Kwezokuphatha
“Enye yezinto ezinhle kakhulu ngokusebenza eHodges University isiko lokusondelana nokusondelana kwabasebenzi bethu. Bayiqembu labantu abazinikele kakhulu nabasebenza kahle engake ngaba nelungelo lokusebenza nabo, ” UJohn D. Meyer, i-DBA, uMongameli
IHodges University ngumqashi onamathuba alinganayo futhi ayibandlululi ngokobuhlanga, umbala, inkolo, ubulili, ubulili, ubulili, imvelaphi yobuzwe, ubudala, ukukhubazeka, noma ezinye izici ezivikelekile ngaphansi komthetho emisebenzini yayo yokuqasha. Yonke iminikelo yokuqashwa ibekelwe ukuqeda ngempumelelo isheke langemuva nokuhlolwa kwezidakamizwa.
IHodges University iyunivesithi yangasese, engenzi nzuzo, eyunivesithi evunyelwe esifundeni etholakala eningizimu-ntshonalanga yeFlorida esebenza kakhulu kubafundi abadala.
Hodges Umbiko Wokuphepha Wonyaka (Clery Act Information and Policy) kanye Nezibalo Zobugebengu zingatholakala ku: Ikhasi Lolwazi Lomthengi. Umbiko wezokuphepha uchaza uHlelo Lokuphepha Lonyaka lukaHodges kanti umbiko weCrime Stats ubala inani nezinhlobo zobugebengu obenziwa ekhampasi noma eduze nasekolishi unyaka nonyaka.
Ngokwezinga i-General Data Protection Regulation (“GDPR”) esebenza kimi, ngiyavuma ukuthi kusetshenzwe iMininingwane Yami njengoba ichazwe yi-GDPR ngezinhloso ezibalulwe futhi ezihlinzekelwe kuzinqubomgomo zeHodges, njengoba kuchitshiyelwa ngezikhathi ezithile isikhathi. Ngiyaqonda ukuthi ezimweni ezithile, nginelungelo lokuphikisana nokusebenza kweDatha Yami Yomuntu. Ngiyaqonda futhi ukuthi nginelungelo lokucela (1) ukufinyelela kwiDatha yami Yomuntu; (2) ukulungiswa kwamaphutha noma amaphutha kanye / noma ukusulwa Kwemininingwane Yami; (3) amaHodges anciphisa ukucutshungulwa Kwemininingwane Yami; futhi (4) ukuthi uHodges ahlinzeke ngeDatha Yami uqobo lapho ecelwa ngendlela ephathekayo.